चैत ५, एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण अनपेक्षित रुपमा चीनमा ‘डिभोर्स’का घटना बढ्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ मिडियाका अनुसार पछिल्लो केही
कोरोनाले अमेरिकामा २२ लाखको मृत्यु हुन सक्ने
चैत ५, एजेन्सि । सरकार र नागरिकले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरूद्ध लड्न बलियो सतर्कता अपनाएनन् भने २२ लाख सम्म अमेरिकी नागरिकको मृत्यु हुन सक्ने बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन्। बेलायती अनुसन्धानकर्ताको चेतावनीपछि
कोरोनाका कारण युरोकपलाई धक्का, एक वर्षपछि धकेलियो
चैत ४, काठमाण्डौ । एकपछि अर्को गर्दै अन्तराष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता स्थगित भइरहेका बेला युरोकप २०२० पनि एक वर्ष पछि सरेको छ । युनियन अफ युरोपियन फुटबल एसोसिएसन (युइएफए) को आजको
प्रदेश दुईको नामाकरणमा राजपा र समाजवादीलाई धक्का, मधेश प्रदेश अस्वीकृत
चैत ४, काठमाण्डौ । प्रदेश नम्बर दुईको नामाकरणमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाललाई धक्का लागेको छ । दुई दलले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव गरेको नाम बहुमतले अस्वीकृत
कोरानाका कारण हुने मृत्युदर बढ्यो, युरोपमा डरलाग्दो बन्दै
चैत ४, काठमाण्डौ । विश्वभर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार ५ सय ११ पुगेको छ । मंगलबार साँझसम्म एक लाख ८९ हजार एक सय ९६ जनामा
एसईई सर्दैन, नयाँ भर्नाका लागि हतार नगरौँ : शिक्षामन्त्री
चैत ४, काठमाण्डौ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) सञ्चालनका लागि पर्याप्त सावधानीको प्रवन्ध गरिएकोले त्रसित र भयभित नभै सहभागि हुन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा सार्वजनिक
प्रदेश प्रमुखको श्रीमतीलाई भ्रमण भत्ता चाहियो, राजनीतिक भेटघाट किन ?
चैत ४, काठमाण्डौ । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तीन दिनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । प्रदेशमा आफूहरुले भोग्नुपरेका समस्याबारे संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरु काठमाडौं आएका हुन् । तर प्रदेश
नयाँ गर्भनरको खोजी, भागबण्डामा अल्झियो नेकपा !
चैत ४, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली विरामी परेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख पद गर्भनर नियुक्ती समयमा हुन नसक्ने पक्कापक्कि भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यको कारण देखाउदै नयाँ
हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी भएन, दर्जनौँ विधेयक अलपत्र
चैत ४, काठमाण्डौ । संघीय संसदको हिउंदे अधिवेशन सुरु भएको ३ महिना बित्यो । तर विधेयक अधिवेशन समेत मानिने हिउंदे अधिवशेनमा दजर्नौ विधेयकहरु अझै अलपत्र छन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएका
तयार भयो कोरोना भाइरसविरुद्दको खोप, सोमबार परीक्षण
चैत ३, एजेन्सी । लामो समयको प्रयासपछि कोरोना भाइरसविरुद्दको खोप तयार भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट जोगाउन विकास गरिएको खोप पहिलोपटक भोलि सोमबार मानिसमा परीक्षण हुने भएको छ
कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने डाक्टर र नर्सलाई सुविधै सुविधा
चैत ३, काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको
सिराहामा भारतमा काम गरेर आएका ९ जनामा कोरोनाको लक्षण !
चैत ३, सिराहा । सिरहा नगरपालिका –१० नरहैयाका ९ जना बिरामीमा कोरोना संक्रमणको आशंका देखिएपछि थप परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल जनकपुर पठाइएको छ । उनीहरुमा कोरोनासँँग मिल्नेे लक्षण देखिएको छ